Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-piraisana naterak'i Millard Fillmore | Alec Baldwin - Fikarohana momba ny vatana teraka
Tranom-pitaovam-piraisana naterak'i Millard Fillmore | Alec Baldwin
Voamarina Fanampiana avy amin'ny Fanahy na Fanahy Ahtun Re ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reenkarnation Ryerson-Semkiw
Ny mpanohana ny ReincarnationResearch.com dia nandefa rohy mankany amin'ny pejy ao amin'ny www.biography.com izay nahitana ireo karazana olo-malaza, satria fantatr'io olona io fa ny fitoviana ara-batana dia voamarina amin'ny tranga vao teraka. Ny fitoviana ara-batana fotsiny dia tsy manangana raharaha momba ny maty ao amin'ny vatana ary ny biography.com dia tsy mampirisika azy ireny ho toy ny lalao taloha. Na izany aza dia nisy ny fahafaha-milaza fa ny sasany amin'ireo fijery maro dia afaka maneho ny tranga vaovao momba ny fanambadiana. Nijery marika maromaro aho izay noheveriko fa mety ho azo itokisana mandritra ny fivoriana miaraka amin'i Kevin Ryerson mba hijerena raha toa ka mety ho toy ny tranga farany teo amin'ny fiainana izy ireo.
Ny lalao iray mitovy habe dia tena nahitana ilay mpilalao sarimihetsika Alec Baldwin ary ny filohan'i Etazonia Millard Fillmore. Tao amin'ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin, Ahtun Re dia nanamafy fa i Baldwin dia i Fillmore teo aloha.
Liana & fitondran-tena taloha: Mety hilatsaka ho amin'ny birao politika i Alex Baldwin
Raha liana, Alec Baldwin dia nanambara ny faniriana ara-politika ary nilaza izy fa raha mikasa ho any amin'ny biraony izy dia ho an'ny governoran'i New York.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, maro ireo mpikatroka no nitady biraom-panjakana. Mino aho fa ny komonantsary mahazatra dia ny hoe ny politisiana sy ny mpilalao dia mahazo aina amin'ny fitenenana eo anoloan'ny mpihaino maro ary mankafy ny fahitana azy.
Fitoviana ara-batana amin'ny fotoana iray amin'ny hafa: Ao amin'ny sary sasantsasany, misy fitovàna manaitra eo amin'i Millard Fillmore sy Alec Baldwin.
Innate Past Life Talent: I Fillmore sy i Baldwin dia mizara ny toetra maha-olom-pirenena mahomby.